‘राजस्व छल्ने साना ठूला कसैलाई छाडिन्न’ « Kakharaa
५ माघ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइयो । विभागलाई कानूनी तथा साङ्गठानिकरुपमा समेत थप सवल बनाइयो । जसका कारण पछिल्ले पटक डेढ वर्षका अवधिमा रु १५ अर्ब कर छली गरेको अभियोगमा ५०६ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति -रासस) ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
विभाग अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत गएपछि के सुधार भयो ?
कर प्रणाली भित्रै जालसाझी गरेर बैंकिङ् प्रणालीलाई नै प्रयोग गरेर कारोबार नै भएजस्तो देखाएर कुनै कारोबार नगरी राज्यको खल्तीमा भएको पैसा निकालेर आम उपभोक्ताले तिरेको राजस्व बाँडडीचुँडी खाएको देखियो । न्यून आर्थिक अवस्था भएको व्यक्ति तथा कामदारका नाममा फर्म दर्ता गराउने दुुई चार हजार दिएर, चिटिक्क परेका टाइसुट लगाएको फोटो खिचाएर फर्म दर्ता गर्ने, बैंकमा लगेर खाता खोल्ने, चेक दस्तखतको अधिकार दलालले लिने गरेको देखियो । एकै पटक दर्जनौं फर्म दर्ता गर्ने अनि प्रेसमा विल छापेर जसलाई जे चाहिन्छ विल बेचेर कमिसन खानेपनि भेटियो । अहिले पनि भ्याट पनि तिर्न नपर्ने तथा २५ प्रतिशत आयकर पनि खर्च दावी गरेर तिर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । १५० बढी विलविजक मात्रै जारी गर्ने फर्म पहिचान, एक हजारभन्दा बढी विल खरिद गर्नेहरु नै फेला परेको र विल बिक्री गर्ने ५० भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाइएको छ । विगत १० वर्ष अघि पनि मसमेत संलग्न भएर अनुसन्धान गरेका थियौँ, हालै मात्र सर्वाेच्च अदालतले ठिक हो भनेर ठहर्याएको छ ।
ठूला, साना भन्ने विषय नै भएन । तपाईँलाई भ्याटमा दर्ता भएर अनुमति दिनु भनेको कर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । त्यसको दुरुपयोग ग¥यो भने दण्डसजायको व्यवस्था पनि कडा छ । शतप्रतिशत जरिवाना हुन्छ । ब्याज, थप दस्तुर लाग्छ । व्यवसायीले गलत नगरोस् है भनेर त्यो व्यवस्था गरिएको हो । अब उसले जानी बुझी गर्छ भने ऊ दण्डित पनि हुन्छ । हामीले छानविन, अनुसन्धान गरेर कर निर्धारण गरेको १० वर्षपछि टुङ्ग्यो लाग्यो भने अब १० वर्षदेखिको ब्याजसहित तिर्नु पर्ने हुन्छ । न्याय मर्दैन भन्ने भएको छ । त्यसकारण हरेक सामान किन्दा बिल लिनुपर्यो, बिलै नलिएपछि त त्यो पैसा राज्यमा जाँदैन । बिल नलिइकन तिरियो भने त्यो पैसा राज्यलाई होइन साहू महाजनलाई तिरियो ।
विगतमा चर्चामा रहेका ठूला औद्योगिक घरानाले छलेको भनिएको भ्याटको समेत फाइल खुल्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
एउटै प्रकृतिका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा फैसला भइसकेपछि त्यसले संविधानबमोजिम नै सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो । भनेपछि अन्यथा होला जस्तो मलाई लाग्दैन । संसारभरी के पनि देखिन्छ भने राजस्व छलेर कर छलेर कोही पनि ‘विलिनियर’ हुन सकिँदैन । इज्जत, सम्मान, मान प्रतिष्ठामा असर पर्छ भन्ने यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । त्यसकारण अहिले हामीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा पनि दिशानिर्देश भएको छ । मलाई लाग्छ सर्वाेच्चको फैसलाले पनि यसलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । आगामी दिनमा कर बुझाउने र कर तिर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन्छ ।